Zvinhu zvinogadzirwa zvinhu zvakagadzirwa zvakafukidzirwa mumhondi wesimbi anotengesa mufekitari - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Architectural Mesh > Mhoteredzo Yepuro>Mvura Dzine Mvura
Zvinhu zvinoshandiswa zvakawanda mune zvemapurani. Inobatanidza kudzivirira kuvanhu oga uye mabasa akawanda akafanana nokuchengeta, kuita mhepo, kuzviparadzanisa, kwezuva. Zvinokosha zvikurusa, kunodzivirira zvivako pakuchinja kwemamiriro okunze.
Simbi ine zvinhu zvakasimba uye simba rakakwirira kumuremu, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuvaka zvivako zvitsva nokugadziridza zvivako zvekare.
Kusununguka kwemvura yemvuraInoshandisa kuzvivako zvamabasa.
Pashure pokurapwa kwomusoro, chitarisiko chazvino uno ichaita kuti chivako chacho chive chakasiyana zvikuru uye chiratidzo.
Mvura yeAluminium Inoparadzwa
Zvinhu ndicho chinhu chinokosha zvikurusa.Zvakasarudza
Kucheka kwesimbi kwakaparadzwa kunofanira kuratidzirwa kunze uye kunoda nharaunda huru, naizvozvo simba rokunyama nokudzivisa kwokupera kunokosha. Zvimwe nesimba kuti uremu tichifunga nezvinetso mukuvaka uye kutsiga kwechirongwa cherambe.
Aluminium ndicho chinhu chinoshandiswa zvikurusa.
I Zviri pachena.
Ndiri chitarisiko chakaisvonaka pashure pokurega.
Simbi inoshandiswawo zvikuru munharaunda dzemamiriro okunze akashata, nemhaka yokuti ine mugumisiro wakanakisisa wokurwisana nemwero.
Kuvakwa Kwechivako Chine Chinodzwa
Pane yesimbi ine chimiro chemhosva yezvitatu nechisirivha.
Marudzi akacheka anomirira ukoshi hwezvakwa.
Nokuda kwomufambisi, miitiro yebhoro yakarongwa nguva dzose, yakafanana neyezvinonyengedza yakakurumbira.
Nokuda kwokuona kwakasimba kwazvo, chimiro chembho uye ukuru kunowanika.
Nzvimbo dzakakodzera dzinogovera mhepo yakanaka. Vagadziri vazhinjisa vanosarudza nharaunda yakazaruka 35% kuti dzidzikamisa pamusoro pezvinhu, sezviedza, kuwedzera mhepo, kuzviparadzanisa, kugadzirwa kwezuva uye kudzivirira kwomunhu oga.
Kurapwa kwemhosva kunosanganisira kupfuu uye kubudirira.
In Powder bunzi rinogovera kusarudza mavara akawanda okufukidza nzvimbo yapakuvamba yesimbi, iyo inogona kubetsera kurwisana nengura nokudzivisa.
In Anodizing inogona kuchengeta ruzha rwenyu rwesimbi paunenge uchida simbi. Kazhinji kazhinji inoshanda kumapanya ealuminium, ayo anogona kudzivirira mapoka ari kuzvinyirira uye kubudisa.
Kuvakwa kwezvivako zvakatsvukuka kwakarovera
Kunze kwezvikonzero zviri pamusoro pezvinhu, vagadziri vairangarirawo kugadzirwa kwakanyanya kwemapikira akazara. Tinogona kungobetsera bedzi kugadzira mapoka akafanana nokukotama kana kuti kutenga.
Zvinhu zvedu zvinoshandiswa zvakawanda mumabasa akasiana - siana, zvakadai senzvimbo dzokupaka, zviteshi zvezvitima, zvitoro zvezvitoro, zvipatara, zvivako zvefurati zvimwe.
Taga: facades architecture, architectural cladding, perforated metal cladding, perforated mesh screen,
Chii chiri chokuita nezvemagadziriro?
Kushandiswa kwechipikisi chemhosva yakamanikidzwa yakarongwa mukuronga
Engineers yeGWS & Fabricator-Perforated Metal Cladding
Nheyo yokuvakwa kwokuvakwa kwezvivako
Chipikisi chemhosva yakaparadzwa
Mvura yesimbi ine mvura
Chii chiri nzvimbo yokuvakwa nayo?
Zvakanga zviri kuita zvinhu zvinova unyanzvi hwokuvaka